Greenwich Meridian: waa maxay, astaamaha iyo waxa loogu talagalay | Saadaasha Shabakadda
Si loo kala qaybiyo dhulkeenna oo loo kala qaybiyo juqraafi ahaan iyo in si cad loo garan karo meesha uu ku yaallo aag kasta, ayaa Greenwich Meridian. Waa sadar khayaali ah oo isku xidha Tiirka Woqooyi iyo Cirifka Koonfureed ee Dunida. Waa khadadka mas'uulka ka ah u kala qaybinta adduunka laba dhinac, bari iyo galbeed. Tani waa sida loo yaqaan 'Greenwich meridian' oo u adeegta tixraac caalami ah si ay awood ugu yeeshaan inay waqtiga ka dhigaan dhammaan waddamada.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato meeriska Greenwich, astaamahiisa iyo waxa loogu talagalay.
1 Maxay tahay Greenwich meridian iyo maxaa loogu talagalay
2 Tiro yar oo taariikh ah
3 Halka aad kaga sugan tahay Spain
4 Qiimaha taariikheed ee meeriska Greenwich
Maxay tahay Greenwich meridian iyo maxaa loogu talagalay
Sida ugu wanaagsan ee lagu barto Greenwich Meridian waa inaad aado London, oo ku dhalatay Royal Observatory-ka ku taal Greenwich, koonfurta caasimada Ingiriiska. Aaggu wax yar baa laga yaqaan, laakiin waa meel ku habboon fasax ahaan safarka London 3 maalmood gudahood. Royal Greenwich Observatory waa astaan ​​lagu fahmi karo goorta iyo sababta Greenwich Meridian u muuqato.
Royal Greenwich Observatory waxay qabatay carwo ku saabsan muhiimadda waqtiga, sida meeriska loo naqshadeeyay, iyo heshiisyada xigta ee waddamada adduunka ay ku dejinayaan jadwalka iyada oo loo marayo. Sidoo kale, laga soo bilaabo halka uu ku yaalo goobta kormeerka, waxaad ka arki kartaa aragti aan caadi ahayn London (illaa inta ay jirto maalin qorax leh).
Greenwich Meridian waxaa loo isticmaalaa in lagu calaamadeeyo waqtiga caadiga ah ee caalamiga. Tani waa heshiis, waana lagu heshiiyey Greenwich, maxaa yeelay Shirkii Adduunka ee 1884, waxaa lagu go'aamiyey inuu yahay asalka meeriska eber. Waqtigaas, Boqortooyadii Ingiriiska waxay ku jirtay xilligeedii ugu ballaarnaa ee isbalaarin, waxaana looga baahnaa inay sidaas sameyso. Hadday boqortooyadii waagaas jirtay mid kale, maanta waxaan oran lahayn meel ka duwan, sida eber meeris. Laga bilaabo milkiilaha Greenwich, aaga waqtiga ee ku habboon dal kasta iyo gobol kasta waa la qaabeeyey.
Xaaladda waddamada Yurub waa mid la yaab leh maxaa yeelay qaaradda Yurub waxaa ka jira dhowr aagag waqtiyeed, laakiin sida ku cad Dardaaranka 2000/84, dalalka ay ka kooban yihiin Midowga Yurub go'aansaday in la ilaaliyo isla saacadaha dhammaan aagagga waqtiga si kor loogu qaado howlaha siyaasadeed iyo kuwa ganacsi. Dhaqankan waxaa laga dhaqan galiyay dalal badan laga soo bilaabo Dagaalkii Koowaad ee Adduunka, markii loo adeegsaday hab lagu keydiyo shidaalka. Laakiin meridian Greenwich-ka marwalba tixraac ayaa loo isticmaalaa.
Waqtiga isbeddelka xilliga jiilaalka wuxuu dhacaa Axadda ugu dambeysa Oktoobar waxayna ku lug leedahay in saacadda horay loogu socdo hal saac. Dhinaca kale, isbeddelka waqtiga ee xagaaga waxa uu dhacaa Axadda ugu dambeysa bisha Maarso, oo macnaheedu yahay in saacadda horay loo socdo hal saac.
Tiro yar oo taariikh ah
Royal Observatory-ka Greenwich waxaa dhisay King Charles II sanadkii 1675, wuxuuna u magacaabay John Franstead inuu noqdo Astronomer-kiisii ​​ugu horeeyay. Ujeeddadu way cadahay: in la hagaajiyo socodka badda iyo in la isku dayo in la helo qaacido lagu xisaabiyo masaafada. Ilaa qarnigii XNUMXaad, Boqortooyada Ingiriiska waxay ahayd awood badeed, sidaa darteed helitaanka tiknoolajiyad hagitaan oo sax ah oo la isku halleyn karo waxay ahayd arrin qaran oo dalka u taal.
Ilaa waqtigaas, marin haynta waxaa lagu fulin jiray si ka yar ama ka yar, laakiin had iyo jeer waxaa jiray khaladaad yar (ama weyn), oo aad uga qaalisan dhinaca aragtida muhiimka ah iyo dhaqaalaha. Si kastaba ha noqotee, 1774, ka dib markii lagu dhawaaqay tartanka, John Harrison, nijaarka ugu dambeyntii saacadda sameeyay, wuxuu soo jeediyay nidaam si sax ah loo cabiro dhigta (masaafada u dhexeysa labada meeriyan) ee khariidada.
Marka la eego cabbiraadda waqtiga, Royal Greenwich Observatory-ka waxaa ku jira meeriska koowaad ee adduunka, iyo inta kale ee meerisyada ah waxaa laga soo qaatay meeriskan oo waxaa loo adeegsaday tixraac lagu aasaasayo aagga waqtiga. Kahor abuurista Greenwich Meridian, ma jirin heshiisyo ku saabsan cabirka waqtiga ama bilowga iyo dhammaadka maalinta. In kasta oo ay jirto saacad, cabbiro saacadle ah Waxaa loo sameeyaa si macquul ah waxayna kuxirantahay iftiinka qoraxda. Si kastaba ha noqotee, hirgelinta jidadka tareenka iyo horumarinta isgaarsiinta qarnigii XNUMXaad ayaa qasbay abuuritaanka nidaam cabbiraadda waqtiga caalamiga ah oo damaanad qaadaya waqtiga iyo saxda.
Halka aad kaga sugan tahay Spain
Meesha dhalashada ee Greenwich meridian waa London. Sidaan horay u soo xusnay, meerisyahanku wuxuu isku xiraa ulaha woqooyi iyo koonfurta, sidaasna wuxuu ku soo koobmayaa dalal dhowr ah iyo dhowr qodob. Tusaale ahaan, Greenwich meridian wuxuu sii maraa magaalada Isbaanishka ee Castellón de la Plana. Calaamadda kale ee isgoyska Meridiano waxaa laga helaa 82.500 kiiloomitir ee wadada weyn ee AP-2 ee Huesca.
Laakiin, dhab ahaantii, Meridiano wuxuu maraa ku dhowaad dhammaan bariga Spain, laga soo galo Pyrenees ilaa laga baxo iyada oo loo marayo warshadda El Serrallo ee Castellón de la Plana.
Qiimaha taariikheed ee meeriska Greenwich
Greenwich waxay leedahay xoogaa soojiidasho ah oo mudan in la arko. Royal Observatory-ku wuxuu ku yaalaa jardiinada isla magaca, taas oo sidoo kale hoy u ah goobo dhaqameedyo kale oo yar oo aysan aqoon dadka soo booqda London. Sidii aan horay u sheegnay, Boqortooyada Ingiriiska waxay ahayd awood badeed illaa qarnigii XNUMXaad. Matxafka Badda ee Qaranka wuxuu ku yaal qaybtan magaalada iyo wuxuu sheegayaa sheekada shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo qabsashadii maraakiibta Ingiriiska. Dabcan, kani waa sheekada rasmiga ah ee ugu rasmi ah, maxaa yeelay dad yar ayaa xusa in qoyska reer boqor ee reer ingiriiska ay lacag siiyeen burcad badeedda Ingriiska si ay ulashaqeeyaan dhibaataynta iyo bililiqaysiga maraakiibta dalal kale sida Spain
Matxafku wuxuu leeyahay nuqulo ka mid ah maraakiibta, dukumiintiyada, iwm, kuwaas oo ka codsanaya kuwa jecel badda iyo kuwa doonaya inay wax badan ka bartaan taariikhda qarankii Ingiriiska.
Maamuus ahaan Isbaanishka, matxafku wuxuu soo bandhigayaa dharkii halyeeygii Ingiriiska Admiral Horatio Nelson. Wuxuu ku dhintay Dagaalkii Trafalgar sanadkii 1805. In kasta oo uu ku guuleystay dagaalka, Ingiriisku wuxuu ka qaybgalay dagaalkan. Waxaa ku murmay kooxo ka socda Faransiiska iyo Spain. Dagaalkii Xorriyadda Isbaanishka ee Napoleon.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto meerisyada Greenwich iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Greenwich Meridian
Sida loo doorto telescope-ka
Diiwaan heerkulka Antarctica